Fivezọ ise echlọ ọrụ Martech na-egwu egwuregwu ogologo oge nke enyere 28% Drop na azụmaahịa azụmaahịa | Martech Zone
Oria ojoo Coronavirus abiala na nsogbu ya na omumu ya site na uzo ndi mmadu, nke onwe ya na nke ahia. Ọ bụ ihe ịma aka idobe uto azụmaahịa ọhụụ n'ihi ọnọdụ edoghị anya akụ na ụba ahịa ohere.
Ma ugbu a na Forrester na-atụ anya ihe ga-ekwe omume 28% dobe na ahia na-emefu n'ime afọ abụọ na-esote, ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ mart,8,000 XNUMX + nwere ike (enweghị ike) na-achọ ịkọwapụta na nkwadebe.
Agbanyeghị, ihe m kwenyere na ọ ga - eme ka azụmaahịa azụmaahịa na - eto eto n'oge fọdụrụ na ọrịa a - ọ bụkwa ezigbo omume maka ogologo oge - ọ ga - agbadata ike, akụrụngwa na akụnụba dị adị.
Ndị a bụ echiche ise iji chekwaa akụ ma jigide ngwa ngwa site na iji ihe ị nwere:
Kpochapụ ihe ndozi na ọghọm: Channel gị n'ime Marie Kondo, ma laghachi na ndepụta ịme ihe ogologo oge gị. N'ikpeazụ leba anya n'ihe ndị ahụ na-adịghị etinye aka na-etinye maka ọnwa, ma eleghị anya ọtụtụ afọ, mana ha nwere ike ịmịpụta ihe na-adị mkpirikpi na ogologo oge. Companylọ ọrụ anyị ejirila aka mbanye backlog ihe na arụmọrụ ahịa, ego, ihe ịga nke ọma ndị ahịa, na mpaghara ndị ọzọ na-eme ka anyị nwekwuo ọfụma, ọbụnakwa na-emepe ohere ọhụụ maka uto.
Ikekwe ị nwere ụfọdụ ndozi akụrụngwa ị rụpụtara na teknụzụ gị. Jiri oge a iji dozie ihe ndị ahụ dị obere ma bulie azụmaahịa gị ma ọ bụ ngwaahịa gị maka mgbe ahịa bidoro ịmalite ọzọ.
Belata ụfọdụ n'ime gị ụgwọ nhazi: Dị ka mmepe teknụzụ mgbe anyị ji ụgwọ ụgwọ ọrụaka, n'ime ụlọ ọrụ anyị na-ewepụta ụgwọ nhazi. Were oge a iji kọwaa ma meziwanye usoro gị, hichaa, ma dịrị n'otu data gị ka ị nwee nghọta ka mma banyere ndị ahịa gị, ngwaahịa na azụmaahịa gị dum. Laghachi azụ mgbe usoro ma ọ bụ mgbanwe ihe onwunwe na-enye gị ohere ịme mpempe akwụkwọ dị ọcha maka usoro azụmahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ndị otu anyị jiri nke anyị n'oge na-adịbeghị anya ahịa data n'elu ikpo okwu (CDP) iji hazie, depụtagharị abụọ, ma hichaa ahịa na ahịa anyị niile gafee silos, yabụ anyị nwere ike ịme ihe dị mkpa karị, nke ezubere iche, ya na ROI ka mma.
Mara teknụzụ gị: Mgbe etinye a ezigbo akụkụ nke mmefu ego n'ime nri tech ngwọta maka gị ahịa, ahịa, IT, na ndị ọzọ, achọ na ndị ọzọ na-egbochi nwere ike amachi gị ìgwè si n'ụzọ zuru ezu-tinye n'ọrụ nyiwe ị na-akwụ maka. Site na Slack gaa na nhọrọ CRM nke ụlọ ọrụ gị, jiri oge a ka ị bụrụ ọkachamara na akụrụngwa dị mkpa na ngwa ọrụ gị, ma ọ bụ nwekwuo ihe ọmụma banyere ngwaọrụ ndị amachaghị. Ọbụna ụlọ ọrụ dị ka Marketo na Microsoft na-ahụ ohere a na na-eme ọzụzụ dị elu maka ngwaahịa ha n'efu.
Gbado anya na ndị ahịa dị ugbu a: Ahịa nwere ike ịdị nwayọ ma ohere ahịa anyị ihu na ihu na-ejedebe n'oge ọrịa na-efe efe (ikwu opekata mpe); kama, nke ahụ apụtaghị na ejikọtara aka gị. Dika ulo oru choro otutu ihe ha nwere, nke a gunyere ndi ahia. Brainstorm na ahịa, ahia, ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa, na ndị ọzọ ịchọta ụzọ okike iji mee ka mmekọrịta ma ọ bụ nwekwuo iguzosi ike n'ihe gafere ndị ahịa gị. Ndị otu anyị amalitela ịmepụta na ịkekọrịta usoro vidiyo nkuzi iji nyere ndị ahịa aka ịnwe nkasi obi na mmasị iji atụmatụ ọhụrụ nke ikpo okwu anyị.
Ugboro abụọ ala na ọhụrụ:'Ve goro ndị ọrụ kacha mma mma, ị na - ewepụta ihe ịchọrọ. Ma, ọ nwere ike ịbụ na ndị ọrụ gị, ọ bụrụ na enyere ha ohere ịme ihe ọhụụ, nwere ike ịkwalite ngwaahịa na usoro karịa? N'oge ezumike, mee ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ kachasị mkpa itinye ego na ihe ọhụrụ. Mepụta ụlọ ọrụ hackathon ma ọ bụ asọmpi enyi na enyi nke na-enye ndị ọrụ ohere nyocha, nyocha, wee weta azịza ọhụụ. Companylọ ọrụ anyị mere nke a n'oge na-adịbeghị anya wee chọpụta na site na ntinye ole na ole, ngwaahịa anyị nwere ike ịbawanye uru karịa ndị otu anyị, yana ndị ahịa anyị.
N'agbanyeghị etu afọ abụọ na-esote si aga, ekwenyere m na ọrịa a na-efe efe echetarala anyị - ndị isi azụmaahịa na ndị ọrụ otu - na mgbe nsogbu bilitere, otu a ka ọ dịkwa ohere. Ihe na-enye ohere maka ohere ndị ahụ ifuru bụ ọdịnala ụlọ ọrụ nke na-akpali nnwere onwe, ihe okike na uto. Ekwesịrị ịgba ndị ọrụ ume ka ha nwalee ihe ọhụrụ wee mee ememme maka ihe okike ha na ngwọta ha.
N'agbanyeghị otu ụlọ ọrụ martech gị kpebiri iji ọtụtụ ihe o nwere - bụrụ na ị na-elekwasị anya na ngwaahịa gị, ngwaọrụ gị, ndị mmadụ ma ọ bụ ndị ahịa gị - ebumnuche kachasị bụ ịkpali agụụ, ọbụlagodi n'oge nsogbu.
Tags: cdpdị ọcha mpempe redesignmpiCRMdevelopmentmbanye anataghị ikikeakụrụngwaọhụrụahia azu ahiaire ahiaahịankataNdị na-ere ahịa Martechmicrosoftụgwọ nhaziTechnology